MediaNP, Author at Media Nepal
१४ फेब्रुअरी अर्थात् प्रेम दिवस अंग्रेजीमा भ्यालेन्टाइन डे आज हो । संसारका प्रेमिल मनहरुको महान दिवस, जुन दिनले करोडौ प्रेमी प्रेमिकाहरुको आत्माको मिलन गराउँछ । नेपाल लगायत विश्वभर यो पर्व हर्सोल्लाहासका साथ एकआपसमा प्रेम साटासाट गरेर मनाइँदैछ । वर्तमान परिभाषामा भ्यालेन्टाइन डे उपहारको माध्यमबाट आफुले मन पराएको व्यक्तिसँग माया साट्ने पर्वको रुपमा लिने गरिन्छ ।कतिपय प्रेमिल मनहरु यसै अवसरमा आफूले …
वास्तुशास्त्र अनुसार विभिन्न दिशाहरुको विभिन्न स्वभावहरु छन् । दिशाहरुको स्वभाव अनुसारका संरचनाहरु त्यस दिशामा बनाउनु राम्रो मानिन्छ । पूर्व दिशाबाट सूर्योदय हुने भएकाले यस दिशाबाट निकै राम्रो उर्जाहरु आउने मान्यता रहेको छ । त्यसकारण पूर्व दिशालाई अन्य दिशाहरु भन्दा निकै महत्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ । पूर्व दिशाको मालिक देवताहरुका राजा इन्द्रलाई मानिन्छ । साथै नवग्रहमध्ये सूर्यले पनि यस दिशाको नै प्रतिनिधित्व …
यो भिडियो मात्र हेर्नु भयो भने तपाइको हासो रोक्न सक्न्नु हुदैन , बाफ्रे बाफ हसाउनलाई मानिसले के सम्म गरे ??भिडियो सहित हेर्नुहाेस हेर्नुहोस यो यो भिडियो मात्र हेर्नु भयो भने तपाइको हासो रोक्न सक्न्नु हुदैन , बाफ्रे बाफ हसाउनलाई मानिसले के सम्म गरे ??भिडियो सहित हेर्नुहाेस हेर्नुहोस योयो भिडियो मात्र हेर्नु भयो भने तपाइको हासो रोक्न सक्न्नु हुदैन , बाफ्रे …
पछिल्लो पटक चर्चाको बिषय बनेको छ, फिल्म कृ । अनमोल केसीको प्रतिक्षारत फिल्म हो हाल देशभरीका हलमा चलिरहेको छ । भारतीय सुपरस्टर अक्षयकुमारको प्याडम्यानसंग जुधिरहेको कृ आफैमा राम्रो चलचित्र हो भन्नेहरु थुप्रै छन् । धेरै दर्शकले फिल्म राम्रो भएको बताईरहदा केही व्यक्तिले भने कृ लाई नराम्रो रुपमा लिएका छन् । चर्चित पत्रकार लेलिन बन्जाडेले कृ झुर फिल्म भएको र आफू …
यकीन गर्न नसकिएला तर यो यथार्त हो कि अमेरिकामा डाक्टरहरुले एक महिलाको आखाबाट १४ किरा निकालेका छन् । मानवजातीको आखाबाट किरा निस्कनु यो पहिलोपटक भएको घटना हो । अमेरिकाको ओरेगांवमा बस्ने एब्बी बैक घोडसवारी र फिशिंगको शौखिन उनी जनावरहरुसँग नजिक रहने गर्छिन । जसको कारण उनी यस्तो बिरामी भएकी हुन् । एक दिन जब उनी घोडसवारीपछि आफ्नो घर फर्किन तब …
कुनै एउटा गाउँ सिर्फ एक जना मानिसको कारण धनि बन्न सक्छ तर केहि समय गरिएको मिहिनेतले मात्र यो सम्भव छ । तर एक्कै रातमा गाउँभरिका मनिसहरु करोडपति भएका छन् । यो कुरा सुन्दा चलचित्रको नाटकमा भन्दा केहि कम छैन तर उनीहरु साच्चिकै करोडपति बनेका छन्। स्पेनको सिरिजेल्स डेल कोन्डान्डो भन्ने गाउँमा उक्त करोडपतिहरु बस्दै आएका छन्। त्यो गाउँमा ८० घर …
अहिले भ्यालेन्टाइन वीक चलिरहेको छ। यो प्रेमको मौसममा सोसल मिडियामा एक भिडियो भाइरल भइरहेको छ। यस भिडियोमा दुई विद्यार्थीहरूले आँखाको माध्यमबाट आफ्नो प्रेम व्यक्त गरेका छन्। सोसल मिडियाका प्रयोगकर्ताहरुले भिडियोमा भएको केटी प्रिया प्रकाशको सुन्दरताबाट प्रभावित भई यस भिडियोलाई शेयर गर्न सुरु गरे। अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाखौँ भ्युज र लाइक्स पाईसकेको छ। यो भिडियो एक मलयालम भाषाको गीतको हो। आगामी …
फागुन कृष्ण अमावस्यालाई ठुलो अमावस्या भनिन्छ किनकी यो महाशिवरात्रि पछि आउँछ। यहाँ हामी केही यस्तो बताउन गईरहेको छौं जसले तपाईलाई धनवान बनाउन सक्छ। ज्योतिषहरुका अनुसार महाशिवरात्रि पछि आउने यो अमावस्या विशेष फलदायी हुन्छ। यस पटक अमावस्याको दिन सूर्य ग्रहण पनि हुने भएको छ। तन्त्र शास्त्रका अनुसार यस दिन अपनाईएको यो उपाय तुरुन्त फलदायी हुन्छ। “>साँझमा पीपलको रुखको फेदमा तोरीको तेलको …
भनिन्छ, केटि मान्छेको रुद्रघन्टी हुँदैन,यसो भन्नुको अर्थ महिलाहरु कुनै पनि कुरालाई लामो समयसम्म मनमा राख्न सक्दैनन् । ‘अरु कसैलाई नभन्नु नि है !’ भनेर कसैले सुनाएको कुरा उनीहरुले कोही न कोही आफ्नो विश्वासपात्रलाई भनेरै छाड्छन् । यसरी गोप्य कुरा कसैलाई चुहाउने उनीहरुको नियत त पक्कै पनि हुँदैन । तर, यस्ता कुरा एक न एकजनालाई नभनी बस्न सक्ने धैर्यता पनि पाइन्न …
एक समयकी सफर र चर्चित अभिनेत्री गौरी मल्लको ८४ वर्षीय पिताको निधन भएको छ । अभिनेत्री गौरी मल्लको पिता धनबहादुर मल्लको सोमबार नै निधन भएको हो । यसअघि गौरीले नै बाबु धनबहादुरको स्याहार गरिरहेकी थिइन्। पूर्व मेजर समेत रहेका मल्लको सैनिक अस्पताल छाउनीमा उपचारको क्रममा निधन भएको पारिवारीक श्रोतले जनाएको छ । उनको अन्त्यष्टि सोमबार बेलुका पशुपति आर्यघाटमा गरिएको हो। …